အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သော အမည်လွှဲမှားနေသောအရာ အမျိုး (၂၀) - ONE DAILY MEDIA
ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသီးအနှံ၊ marsupial ဝက်ဝံ၊ ကျိုင်းကောင်ဖြစ်သော သန်ကောင်…. သင်ဘာအကြောင်းတွေပြောနေတာလဲ?
အထင်အမြင်နှင် အမည်လွဲမှား‌နေသော အရာများအတွက် အထူးအခေါ်အဝေါ် များရှိပါတယ်။ ဤသည်ကို ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ စူးစမ်းလေ့လာပါမည်။
(၁) ငါ့ခေါင်း ဒီလောက်ပြောင်လား ??
လင်းယုန်ဟာ ထိပ်ပြောင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ၎င်း၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် အဖြူရောင်အမွေးများရှိပြီး မြောက်အမေရိကမှ တစ်ခုတည်းသောထူးခြားလင်းယုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏တောင်ပံသည် ၇ ပေအထိ မြင့်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ အဓိက အစားအစာမှာ ငါးဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ၎င်းအတွက် အိမ်နောက်ဖေးမှာ နေရာတူးလိုက်ပြီ
၎င်းဟာ ခွေးမဟုတ်ပဲ မြောက်အမေရိကတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော ချစ်စရာကောင်းသော ကြွက်ဖြစ်ပါတယ်။။ သူတို့က အလုပ်ကြိုးစားပြီး မိသားစုကို ဦးစားပေးပါတယ်။ သူတို့သည် မြေတွင်းများနှင့် နက်သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ ဆောက်ပြီး ကိုလိုနီနယ်မြေကြီးများတွင် နေထိုင်ကြပါတယ်။
(၃) The Turkey Saga
လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာက တာ့ခ်လူမျိုးများသည် အရှေ့အာဖရိကမှ ဥရောပသို့ ဂီနီငှက်များကို တင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဥရောပတွင်မြင်ရသော်လည်း ငှက်သည် တူရကီမှ ပေါက်ဖွားလာသောကြောင့် ငှက်ကို “တူရကီငှက်” သို့မဟုတ် “တူရကီ” ဟု အတိုကောက်ခေါ်သည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပ စူးစမ်းလေ့လာသူတွေဟာ မြောက်အမေရိကကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ သူတို့သိတဲ့ “တူရကီ” နဲ့ အလွန်ဆင်တူတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ဆီ ပြေးလိုက်သွားကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Voila ဟူသော နာမည်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
၎င်းဟာ မချိုသလို ပေါင်မုန့်နှင့်လည်း ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ၎င်းသည် အစာအတွက် အသုံးပြုသော တိရိစ္ဆာန်၏ thymus ဂလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ရတာ အရသာမရှိဘူးလား ??
တူရကီတို့၏ရေစိမ်ခြင်းသည် တူရကီမဟုတ်ဘဲ ရောမမြို့မှ အစပြုတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Hellenic-Roman ခေတ်တွင် လူသိများလာခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အပန်းဖြေရန်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် အပန်းဖြေရန်အတွက် အမြဲတမ်း အဆင့်မြင့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သခွားသီးဟာ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်မဟုတ်ပါဘူး ။ အပင်၏ အပွင့် အစိတ်အပိုင်းမှ ဆင်းသက်လာပြီး အစေ့များ ပါသောကြောင့် ရုက္ခဗေဒအရ ပြောရလျှင် ၎င်းသည် သစ်သီးဖြစ်ပါတယ်။
ဂီနီဝက်သည် ဂီနီမှ ဆင်းသက်လာသည်မဟုတ်သလို ဝက်လည်းမဟုတ်ပေ။ လေ့လာမှုများအရ ဂီနီဝက်များကို လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၃,၀၀၀ ကျော်က ပထမဆုံး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးမြူခဲ့ကြပါတယ်။
ပိုးကောင်သည် သန်ကောင်မဟုတ်ပါ – ၎င်းကို ပိုးကောင်ဟုပင် ပို၍ကျယ်ပြန့်စွာ သိကြပါတယ်။ ပိုးကောင်များသည် ပိုးစာရွက်ကိုသာစားပါတယ်။ အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်များထဲတွင် ပိုးကောင်များဟာ အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း 5,000 ဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ယခုအခါ တောရိုင်းများတွင် မရှိနိုင်တော့ကြောင်း သိရပါတယ်။
(၉ ) နဂါးဟုခေါ်နိုင်ပါတယ်
၎င်းသည် မြောက်အမေရိကမှ အိမ်မြှောင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။။ အမျိုးအစား ၁၃ မျိုးရှိပြီး အများစုမှာ နဂါးကလေးများနှင့်တူပါတယ်။
ငှက်ပျောပင်သည် သစ်ပင်မဟုတ်ပါ – ပင်စည်တွင် ထူးထူးခြားခြား မပါဝင်သောကြောင့် ဆေးပင်ဖြစ်ပါတယိ။
(၁၁) အမေ့သားလေးကဘယ်သူလဲ ?
koala ဝက်ဝံသည် ဝက်ဝံမဟုတ်ပဲ ၎င်းသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ ပေါက်ဖွားလာသော marsupial ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအာလာ မိခင်များသည် ၎င်းတို့၏ ကလေးငယ်များကို အသက် ၆ လအရွယ်အထိ အိတ်ထဲတွင် သယ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။
(၁၂) PB နှင့် JS ဘယ်တော့မှမတူညီနိုင်သောအရာ
မြေပဲသည် အခွံမာသီးမဟုတ်ပေ၊ ပဲနှင့်ပဲစေ့များကဲ့သို့ မြေအောက်တွင်ပေါက်သော ပဲတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
(၁၃) catgut နှင့်ကြောင် မဆိုင်ကြောင်း
ကြိုးတွေလုပ်ရာမှာသုံးတဲ့ catgut ဟာ ကြောင်ကနေလာတာမဟုတ်ပါဘူး – တကယ်တော့၊ သိုး ဒါမှမဟုတ် မြင်းတွေရဲ့အူကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ တယော၊ ဂစ်တာ နှင့် စောင်းများအတွက် ဂီတနယ်ပယ်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
Jack rabbit တစ်ကောင်သည် သာမန်ယုန်မဟုတ်ပါဘူး၊၎င်းတို့သည် အရွယ်အစားပိုကြီးပြီး နားရွက်ကြီးများရှိပါတယ်
ပိုးစုန်းကြူးသည် ယင်ကောင်မဟုတ်ချေ၊ အမှောင်ထဲတွင် တောက်ပြောင်နေသည့် ပိုးကောင်ဖြစ်သည်။ အဖော်ရှာရန် ကူညီပေးသည့် ထူးခြားသောအလင်းရောင်ပုံစံဖြင့် ပိုးစုန်းကြူးအမျိုးပေါင်း ၂၀၀၀ ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ကြယ်သည် ကြယ်မဟုတ်ပေ၊ ၎င်းသည် လေထုထဲသို့ ဖြတ်သွားသော ဥက္ကာခဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မင်းဆန္ဒ မဖြစ်အောင် ဘယ်အရာကမှ တားဆီးလို့မရပါဘူး။
(၁၇) လက်ရေးလှရေးခြင်း အနုပညာ၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခု
အိန္ဒိယမှင်ကို အမှန်တကယ် ၎င်းကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိသျှတို့က ၎င်းနှင့် တက်ကြွစွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသော အိန္ဒိယထံမှ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သောကြောင့် နာမည်မှာ ကပ်နေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် မှင်ကို ပုံဆွဲခြင်းပြုလုပ်ရန် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။
(၁၈) မှော်ဆန်သော Jumping bean
မက္ကဆီ jumping bean သည် ပဲတစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ အတွင်းဘက်တွင် ပိုးဖလံပိုးလောင်းလေးများပါသည့် အစေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးလောင်းသည် အတွင်းဘက်သို့ ရွေ့သွားသောအခါ ပဲနှင့်ပိုမိုဆင်တူလာပါတယ်။
(၁၉) ထောပတ်ကွတ်ကီး – ဗြိတိန် သို့မဟုတ် စကော့တလန်
မုန့်ချပ်လေးများ ပေါင်မုန့်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် ထောပတ်ကွတ်ကီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်နည်းက လွယ်ပါတယ်။ တစ်ချပ်-သကြား ၊ နှစ်ချပ်-ထောပတ်၊ သုံးချပ်- ဂျုံမှုန့် ပါဝင်ပါတယ်
(၂၀) ချစ်စဖွယ်ဟုထင်ရသော်လည်း အိမ်မှာမမွေးပါနဲ့
Puss caterpillar သို့မဟုတ် Megalopyge opercularis သည် အပြစ်ကင်းသော သားမွေးဘောလုံးနှင့်တူနိုင်ပြီး ကြောင်နှင့်ဆင်တူသော်လည်း ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသောသတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ ထူထပ်တဲ့ အမွှေးတွေက တကယ်တော့ အဆိပ်ရှိတဲ့ ကျောရိုးတွေလိုပါပဲ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မွေးမြူရန် ကြိုးစားပြီးနောက် လူအများအပြားကို ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အမည်များသည် အမှန်တကယ် ကိုက်ညီသောအရာများကို အမြဲတမ်းကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ အမည်နှင့် ပုံစံလွဲမှားနေသော အခြားအရာတစ်ခုခု သင်သ်ိတာရှိပါက မျှဝေပေးပါဦး ။